Tovovavy mpianatra ao amin’ny CEG iray ao Ifotaka- Amboasary Atsimo no maty tsy tra-drano, omaly atoandro voatifitr’io miaramila kilasy faharoa iray, hoy ny fanazavan’ny loharanom-baovao iray. Voatifitra teo amin’ny saokany ilay tovovavy ary nivoaka tao amin’ny hatony mihitsy ny bala tamin’izany. Miantso ny hijerena izao habibiana izao ny mponina sy ireo tompon’andraikitra samihafa ao an-toerana.
Voasambotra sy hanokafana fanadihadiana ireo ray aman-drenina ankizikely efa-taona nodorana tamin’ny kitay tao Ambanja. Nilaza ny ray aman-dreniny fa noho ny ditrany no antony nanaovan’izy ireo izany tamin’io zanany io. Hatolotra ny fampanoavana ny raharaha aorian’ny famotorana.
Nahazo fahafahana vonjimaika ireo roa lahy voarohirohy nitondra ireo voamboana miisa 536 avy any Ambatondrazaka nihazo ny renivohitra. Tsihivina fa tratran’ireo zandary teo Ambatoloana, ny alahady teo ny fiara nitondra izany. Mbola karohina kosa ny vehivavy tompon’ireo voamboana saika haondrana an-tsokosoko ireo.